Kobci Soosaarayaasha Bac | Warshada Kobaca Shiinaha & Alaab-qeybiyeyaasha
Qalabka PE Kobcinta Bacda Baradhada Beerta Banaanka ee Bacda Khudaarta la neefsan karo
VIREX PE Baradhadu waxay koraan bacaha Cabbirro badan oo Gallon lagu beero kiish dheri ah oo la neefsan karo
Kobaca Bacda Baradhada Deegaanka-saaxiibtinimo 1-20 Gallons
Bacaha baradhada ayaa wali ka samaysan dhar aan tol lahayn, taas oo inta badan loo isticmaalo in lagu beero baradhada. Bacda baradhada ayaa wax yar ka duwan qaab ahaan marka loo eego bacda koraan waayo waxay leedahay daaqad muuqaal ah.Daaqadda muuqaalka waxaa loogu talagalay dhejisyo la furi karo wakhti kasta si loo eego koritaanka baradhada
Koor Boorsada Marro aan-dhuubnayn 1-400 Gallons Bacda Kobaca Beerta
Bacaha koraan waxaa inta badan loo isticmaalaa beerta guriga waxaana loo isticmaali karaa jardiinooyinka, gudaha iyo meelaha kale, beerashada khudaarta iyo miraha xilliyeedka. Waxa kale oo aad ku beeri kartaa ubax si aad deegaankaaga ku nool u wanaajiso.VIREX kora bacaha walxaha bacda korriinka waa maro aan tol lahayn, taas oo ka badan Eco-saaxiibtinimo. Nakhshad laba gacan si ay u sahlanaato dhaqaaqa.
Naqshad Cusub Oo Koritaanka Shandad La Habeeyay Isticmaal Waara Khudaar la beeray
Bacda koritaan VIREX waa mid aan tol lahayn, tignoolajiyada tolmada labajibaaran, gacanka la xoojiyay ayaa dib loo warshadayn karaa beerto.
Shandad Caleenta PE waxay ka tagtaa Haysta-ururinta Bacaha Bacaha Beerta ee dib loo isticmaali karo
Bacda caleenta VIREX waa ujeedo badan, Ku habboon ururinta haramaha, goynta cawska, dhammaan noocyada qashinka deyrka. Waxaan naqshadeynay gacan-sare iyo hoosba, oo ku habboon in la guuro oo ku shubo caleemaha gudaha.